Soo-saareyaasha Soosaarayaasha iyo Alaabada Dabacsan - Shirkadaha Jumlada Kuleylka Leh ee Qaboojiyaha
Qaboojiyaha Laabta Qaboojiyaha Flat Glass
YB Dareeraha Laabta Qaboojiyaha Flat Glass wuxuu adeegsanayaa muraayadda 4mm sabaynaysa muraayadda Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddayn adkaysiga muraayadda baabuurta. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃.
Muraayadda Muuqaalka Jalaatada
Muraayada YB Ice Cream Display Glass waxay isticmaaleysaa muraayadda 4mm sabaynaysa muraayadda Low-E ee qabow, taas oo ah shil kahortaga, qarax-cadeyn la'aanta muraayadda gawaarida. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃.
Cake Golaha Wasiirada Display Glass
YB Cake Cabinet Display Glass waxay isticmaaleysaa muraayad dhererkeedu dhan yahay 6mm oo muraayad u ah Low-E, taas oo ah shil kahortaga, astaamaha qarxa oo adkeysanaya muraayadda gawaarida. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃.